Nyanzvi dzeHutano Dzoshushikaka neMadzimai Ari Kufa Achisununguka Vana
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dziri kuyambira kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kunge chapa kuti huwandu hwemadzimai ari kufa achisungunuka huti wedzerei.
Ongororo yakaitwa nebazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF muna 2019, inoratidza kuti madzimai mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 462 pamadzimai zviuru zana kana kuti 100 000 vanofa vachisungunuka muZimbabwe.
Huwandu uhu hwange hwakati derere pane madzimai mazana matanhatu negumi nevana kana kuti 624 vaifa vachisungunuka pamadzimai zviuru zana kana kuti 100 000 muna 2017.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen’s Action Group, Amai Edna Masiiwa, vanoti huwandu hwemadzimai ari kufa achisungunuka hwakaderera asi kufa kwemudzimai kana mumwe chete kunoshungurudza.
Vaenderera mberi vachiti kugara kure nezvipatara kunopa kuti hupenyu hwemadzimai huve munjodzi sezvo vachizosvika pakuda kusungunuka vasati vavhenekwa nachiremba sezvinokurudzirwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehutano Dr Tonotenda Michael Simemeza vatiwo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai zvinosanganisira denda remoyo uye zvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano, Dr Josephat Chiripanyanga, vakurudzirawo zvakanyanya varume kuti vapote vacheperekedzana nemadzimai avo kuenda kumakiriniki kuti vanzwe zvinenge zvichitaurwa navanachiremba zvinozobatsira kuti madzimai asungunuke nyore.
Vatiwo nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCovid-19, hurumende dzakawanda kusanganisirawo yeZimbabwe hadzichakoshese hutano hwemadzimai akazvitakura nezvimwe zvirwere.
Mukuyedza kubatsira madzimai akazvitakura munyika yeZimbabwe, sangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA, rakanyorerana chibvumirano nenyika yeJapan chekubatsira nemari inosvika miriyoni imwechete nezviuru mazana matatatu emadhora ekuAmerica, kana kuti USD1,3 million.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano, vachishanda nesangano reUNFPA, Dr Edwin Mpeta vanoti chirongwa ichi chichabatsira zvipatara nemakiriniki zvemumaguta eHarare neBulawayo sezvo muri imo makaonekwa kuti mune madzimai akawanda ari kufa achisungunuka.
Doctor Mpeta vanoti zvipatara nemakiriniki zvichatengerwa zvinoshandiswa pakubatsira madzimai akazvitakura uye nezvipfeko zvekudzivirira kutapuriranwa kweCovid 19 pakati pemadzimai akazvitakura nevakoti navanachiremba.
UNFPA inoti pagore, madzimai zviuru gumi nezvishanu kana kuti 15, 000 vanosungunuka kuBulawayo ukuwo vamwe zviru makumi mana nevashanu kana kuti 45, 000 vachisungunuka muHarare.
Pamadzimai ose aya, zviuru mapfumbamwe kana kuti 19, 000 vanoda kuvhiyiwa uye vachabatsirwa nemari yabva kuJapana iyi.